Okwu Mmalite nke Suko Ptfe （Uhmwpe） Ram Rod Extruder - SuKo Polymer Machine Tech Co., Ltd.
PTFE (polytetrafluoroethy) bụ nke a na-akpọkarị PTFE, Teflon na King Plastic. Ihe omuma nke Teflon bu igwe nke puru iche na ihe PTFE (UHMWPE) na emeputa site na usoro nke usoro dika extrusion, kpo oku na obi jụrụ, ihe ndi ozo PTFE na-edozi site na ram rod extruder iji meputa PTFE mkpanaka ngwaahịa na-ezute nkọwa dị iche iche. Emetụta ihe ndị metụtara ya dịka iji, nkọwa, ihe eji eme ihe, ihe ndị ọrụ chọrọ, wdg, Suko nwere ike ịmepụta ma mepụta igwe mkpanaka PTFE nke nkọwa dị iche iche. A na-eji polytetrafluoroethylene (ultra high molekụla arọ polyethylene) emepụtara site na ebule extruder na kemịkal, ọgwụ, mbara igwe, nhazi igwe, mgbanwe okpomọkụ na mpaghara ndị ọzọ.
Suko na ọtụtụ afọ nke nnyocha na mmepe ahụmahụ na ngalaba nke PTFE akụrụngwa, specializes na nnyocha, mmepe, mmepụta na ahịa nke PTFE akụrụngwa. Ngwa anyị ejirila ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba iri anọ na mpaghara mba ụwa. Ndị ahịa anyị sitere na ụlọ ọrụ ahụike, ụlọ ọrụ aerospace, ụlọ ọrụ ndị agha, ụlọ ọrụ kemịkalụ, ụlọ ọrụ ụgbọ ala na ụlọ ọrụ nrụpụta dị iche iche dị iche iche, Suko ejiriwokwa ụlọ ọrụ fluoroplastic mba niile mara.
Ozi ụlọ ọrụ: Ka imepụta ngwa ahia PTFE nke izizi n’ụwa. Suko kwesiri ka itukwasi gi obi.
1. Njirimara nke PTFE （UHMWPE） RAM ROD EXTRUDER
PTFE mkpanaka extruder nwere ike na-aga n'ihu inupụ mkpanaka na mkpanaka nwere ike bee dị ka chọrọ.
Na vetikal PTFE mkpanaka extrusion igwe site na elu gaa na ala. A na-etinye akụrụngwa n'elu ikpo okwu ma ọ bụ n'ala ya na elu ya dị ihe dị ka mita 2.8. Ekwesiri ịtụle ụzọ dị ogologo na ụzọ ogologo nke ngwaọrụ a, na ị ga-enwerịrị ogo dị elu n'okpuru oghere okirikiri nke ngwaọrụ ahụ iji mezuo ihe achọrọ ogologo nke mkpanaka PTFE.
Kwụ PTFE mkpanaka extrusion igwe Ọ dị mkpa ịtụle ebe dị irè na ntanetị nke akụrụngwa, ọ dịkwa mkpa iji hụ na ogologo nke mkpanaka PTFE. Akụrụngwa ahụ gụnyere ebu ebu nke 4-7 mita (ewepu ogologo nke extruded okokụre mkpanaka), obosara nke 1.2 mita, a elu nke 1.8 mita.
Machine Ft ebe (m2) 3.5 7 10
Bee ihe ptuded PTFE rod to the ogologo chọrọ.
7. AKW ACKWỌ NA AKWAREKWỌ AKWAREKWỌ AKWAREKWỌ
8. Nhazi usoro
9. MGBE Ahịa ahịa
10. PTFE ODLỌ AKW AKWỌ AKWUTKWỌ AKWUTKWỌ AKWOMKWỌ
Agụụ akpaka nri, gụnyere abịakọrọ ikuku agbara ịfụ usoro, na-amalite nri usoro, na-asa sooks, mmiri egbe, agụụ generator, PCB njikwa, throughput 30-300 kg / h, dayameta 150mm na elu 600mm, setịpụrụ akpaka nri oge na ịrụzu oge, ntụ eruba bụ controllable, niile igwe anaghị agba nchara mmepụta, ọgụgụ isi akara.
11. AKW OKWỌ AKW OKWỌ AKW OKWỌ AKW .KWỌ